Booliska Dalka Turkiga Oo Baadi Goob Xoogan Ugu Jira Ninkii Fuliyay Weerarkii Dadka Badani ku Dhinteen Ee Lagu Qaaday Magaalada Stanbul. – Xeernews24
Booliska Dalka Turkiga Oo Baadi Goob Xoogan Ugu Jira Ninkii Fuliyay Weerarkii Dadka Badani ku Dhinteen Ee Lagu Qaaday Magaalada Stanbul.
Booliska dalka Turkiga ayaa howlgalo sameeyay waxayna xireen 12 qof, iyadoo weli uu socdo ugaarsiga ninkii qaaday weerarkii Istanbul ee 39-ka qof ay ku dhinteen.
Ra’iisul wasaare ku xigeenka Turkiga, Numan Kurtulmus wuxuu sheegay in maamulka ay heleen faraha iyo akhbaarta aasaasiga ah ee ku saabsan ninkaasi, wuxuuna wacad ku maray inay si degdeg ah kusoo qaban doonaan.
Qiyaastii illaa 600 oo qof ayaa ku sugnaa kalaabka lagu caweeyo ee Reina markii ninkan uu weeraraayay Axadii.
Ururka la baxay Khilaafada Islaamka ayaa sheegtay masuuliyadda weerarkaasi.
Mr Kurtulmus wuxuu weriyayaasha u sheegay: “Xogta ku saabsan ninkan iyo muuqaalkiisa ayaan helnay”.
“Tallaabada xigta waxay tahay, inaan sida ugu dhaqsaha badan ku aqoonsano. Waxaan fileynaa inaan helno asiga iyo xiriirkiisa iyo shaqsiyaadka taageerada ku siiyay gudaha kalaabka iyo dibaddaba,” ayuu yiri.
Mr Kurtulmus wuxuu xaqiijiyay in sideed qof la xiray. ka dib waxaa la arkay ciidamo gaar ah oo diyaarad ay wehliso oo howlgal ka fulinaya guri ku yaalla degmada Zeytinburnu.
Qofka weerarka fuliyay lama qaban, laakiin afar qof oo kale ayaa meelo kala duwan laga soo xiray.
Warbaahinta dalka Turkiga ayaa sidoo kale baahiyay muuqaallo ay ku sheegeen ninka laga shakisan yahay, balse ma cadda xilliga la qaaday iyo goobta uu ku sugnaa.
Warbaahinta dalkaasi ayaa sidoo kale soo xiganaya boolis sheegaya in ninka uu ka soo jeedo Uzbekistan ama Kyrgyzstan.
Booliska waxay sidoo kale baarayaa in weerarkan uu xiriir la leeyahay mid ay Daacish ku qaaday garoonka diyaaradaha ee Ataturk, bishii June ee sanadkii dhammaaday.
Mr Kurtulmus wuxuu sheegay in weerarka uu “farriin” u ahaa howlgalka Turkiga ee Suuriya, balse uusan saameyn doonin.
Turkiga ayaa howlgal militari ka wado dalka Suuriya, kaas oo bilowday bishii August. Ujeedada waxay tahay in ururka la baxay Khilaafada Islaamka laga riixo nawaaxiga xuduudda Turkiga.
‘Toogasho aan kala sooc lahayn’
Ninka ayaa la sheegay inuu rasaasta u ridayay si aan kala sooc lahayn. Waxayna socotay illaa todobo daqiiqo, wuxuu toogashada ku billaabay askartii amniga ee ku sugnaa meesha.
Waxaa lagu warramayaa in markaasi ka dib uu dharka iska badalay, meeshana uu ka baxsaday intuu qalalaasaha taagnaa.
Image caption Albaabka Brandenburg ee Berlin oo calanka Turkiga loo badalay si loo xasuusto dhibanayaasha
Dadka ugu badan ee meesha lagu dilay waxay ahaayeen ajaaniib, ka soo kala jeeday Israa’iil, Ruushka, Faransiiska, Tunisiya, Lubanan, Hindiya, Belgium, Urdun iyo Sucuudiga.
Tirada dal kastaa uga dhimatay meesha
Urdun, Hindiya, Maroko: min laba muwaadin ayaa uga dhimatay
Jarmalka, Suuriya, Israa’iil, Faransiiska, Tunisiya, Belgium, Kuwayt, Canada, Ruushka: Min hal muwaadin ayaa looga dilaybody of one of those who died has yet to be identified.
Ugu yaraan 69 qof oo ku dhaawacantay weerarka ayaa cisbitaallada lagu daaweeyay.Waxaa la arkayay rasaas ku dheceysa gawaarida, xilligii uu ninka weerarka fulinaayay. Kalaabka waa mid ka mid ah goobaha ugu caansan ee magaalada Istanbul, halkaas oo ay tagaan ajaaniibta booqata dalka Turkiga.Magaalada Istanbul waxaa hadda ka jiro feejignaan dheeraad ah. Illaa 17 kun oo ciidamo dheeraad ah ayaa ka howlgalaya magaalada.
Dhowr weerar ayaa dhowaantan ka dhacay magaaladaasi.
10 December: Laba qarax ayaa waxay ka dheceen dibadda garoon kubadda lagu ciyaaro, 44 qof ayaa ku dhimatay, Kooxda Kurdiyiinta ayaa sheegatay masuuliyadda.
20 August: Qarax ka dhacay xaflad aroos oo ka socotay Gaziantep waxaa ku dhintay ugu yaraan 30 qof, Daacish ayaana looga shakiyay inay ka dambeysay.
30 July: 35 dagaalyahan Kurdish ah ayaa isku deyay inay xoog ku galaan saldhig milirati, halkaas ayaana lagu dilay.
28 June: Weerar qarax iyo rasaas oo lagu qaaday eelaboorka Ataturk ee Istanbul waxaa lagu dilay 41 qof, daacish ayaa sheegatay.
13 March: 37 qof ayaa lagu dilay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Ankara, waxaa ka dambeyayay Kurdiyiinta.
17 February: 28 qof ayaa ku dhimatay weerar lala eegtay kolonyo militari oo ku sugnaa Ankara.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png 0 0 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-01-03 10:18:482017-01-03 10:18:48Booliska Dalka Turkiga Oo Baadi Goob Xoogan Ugu Jira Ninkii Fuliyay Weerarkii Dadka Badani ku Dhinteen Ee Lagu Qaaday Magaalada Stanbul.
Lixdii Goobood oo Wali daan-daansigii ku socdo iyo beeshi ciise oo ogolaatay... Jaamacadda Carabta oo soo dhaweysay furitanka howlaha Baarlamaanka cusub ee...